झगडा नगरी जीवन बिताउनका लागि जोडीले पढनैपर्ने यी ५ उपायहरु ! -
काठमाडौं । युवापुस्ताबीच प्रेम अहिले सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको अहिलेको समयमा जती सजिलै जोडीहरु बन्छन्, त्यसरी नै छुट्टिन्छन् पनि । यो अहिलेको वास्तविकता हो । तर, सम्बन्धलाई दीर्घजीवन दिन नसकिनेनै भने होइन । केही सामान्य कुराहरुमा ध्यान दिने हो भने सम्बन्धहरु मजबुत र सफल तथा आकर्षक बन्न सक्दछन् ।
हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! यी गल्तीहरुले जान सक्छ ज्यान !